Cali Xarbi oo la soo taagay maxkamad isagoo lagu eedeeyay dil iyo argagaxisinimo - Jowhar somali news leader
Cali Xarbi Cali oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururada argaggixisada uuna toori ku dilay Xildhibaan Tory Sir David Amess oo kaniisad ku sugnaa ayaa maanta ka soo muuqday maxkamad isagoo dhoolla caddaynayo,waxayna dacwad oogayaasha ay ku eedeeyeen inuu xiriir la leeyahay Daacish iyo inuu diyaariyay weerar argagixiso laga bilaabo May 2019.
Cali Xarbi Cali oo 25 jir ah ayaa ka soo muuqday Maxkamadda Westminster Magistrates ‘Court oo lagu soo oogay dilka Sir David Amess.
Waxaa lagu eedeeyay inuu dilay xildhibaankii ruug cadaaga ahaa ee muxaafidka ka dib markii uu galabnimadii jimcaha safaf la galay dadka ka soo jeeda degaanka Sir David ee Westhend West.
Cali wuxuu xidhnaa Suut cawlan iyo muraayado madow, wuxuuna u dhoolla-caddaynayay kooxdii sharciga ahayd markii uu maxkamadda soo galayay. Kadib wuxuu u fadhiistay si aamusnaan ah dhegaysiga oo dhan, kaliya wuxuu u hadlay si uu u xaqiijiyo magaciisa, da’da, iyo cinwaankiisa.
Dacwad -ooge James Cable ayaa maxkamadda maanta u sheegay: ‘Cali wuxuu isu haystay inuu xiriir la leeyahay Dawladda Islaamka IS.’
Cali ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu u diyaar garoobay falal argagixiso laga soo bilaabo 1 -dii May, 2019 ilaa 28 -kii September ee sanadkan.
Sir David ayaa dhaawacyo badan oo tooreey ah ka soo gaaray weerarkii Jimcihii la soo dhaafay inkastoo dadaal badan ay sameeyeen dhakhaatiirta gurmadka si loo badbaadiyo noloshiisa, xildhibaanka ayaa u dhintay dhaawicii soo gaaray.
69-jirka aabaha dhalay shan carruur ah ayaa weerar gaadmo ah lagu qaaday kulan Jimcihii uu la qaatay dadweynaha waxaana lagu weeraray mindiyo 17 jeer.
Toddobaad su’aalo ay weydiinayeen Scotland Yard iyo sidoo kale baaritaannada gurigiisa iyo aaladaha elektiroonigga ah, Cali waxaa lagu soo oogay dacwad dil iyo dacwad kale oo ah diyaarinta falal argagixiso.
Nick Price, Madaxa Qeybta Dambi -baarista Gaarka ah iyo Qeybta Argaggixisada, ayaa yiri: ‘Xeer Ilaalintu waxay oggolaatay dacwad ka dhan ah Cali Xarbi Cali oo loo haysto dilka xildhibaan Sir David Amess. Waxaan u gudbin doonnaa maxkamadda in dilkan uu leeyahay xiriir argagixiso, oo ah inuu lahaa dhiirigelin diimeed iyo mid feker ahaanba. Waxaa sidoo kale lagu soo oogay dacwad ku saabsan diyaarinta falal argagixiso. Tani waxay daba socotaa dib -u -eegista caddaymaha ay Boolisku Metropolitan ku soo ururiyeen baadhitaankooda ‘.
Cali weli wuu xiran yahay wuxuuna marka hore ka soo muuqan doonaa Maxkamadda Westminster Magistrates.
‘Rice jihad’: the video falsely accusing Muslims of poisoning Hindus…